The New Land Rover Defender 2020 ကားသစ်မိတ်ဆက်ပွဲကို Online Launching အနေဖြင့် ပြသမိတ်ဆက်ခဲ့
Off-Road တွေမှာ ပြိုင်ဘက်ကင်း စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့ The New Defender On-Road တွေမှာလည်း Luxury ဆန်တဲ့ ငြိမ့်ညောင်းမှုတွေနဲ့ The New Defender ဒီလိုမျိုး Off-Road & On-Road King The New Defender မှာ ဘာတွေပါလာသလဲ? ဘယ်လိုနည်းပညာတွေသုံးထားသလဲ? ဆိုတာ ကိုလေ့လာခံစားကြည့်ရအောင် ............
Posted by Redline Media on Friday, 18 September 2020
The New Land Rover Defender 2020 ကားသစ်မိတ်ဆက်ပွဲကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် Online Launching အနေဖြင့် ပြသမိတ်ဆက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
The New Land Rover Defender 2020 သည် ထူးခြားသည့်ဒီဇိုင်း၊ Defender ၏ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊ အကြမ်းခံသည့် SUV တစ်စီးဖြစ်ခြင်း၊ လမ်းကောင်းများတွင်လည်း သက်သောင့်သက်သာမောင်းနှင်နိုင်ခြင်း၊ မိသားစုဝင်များအတွက်လည်းထိုင်ခုံများကို ၅ ယောက်စီးမှ ၇ ယောက်စီးအထိ မှာယူနိုင်ခြင်း၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Model ကို စိတ်ကြိုက်မှာယူနိုင်ခြင်း စသည့်အချက်များဖြင့် မိတ်ဆက်ပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ The New Defender ဟာ ခေါတ်သစ် Defender အသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ ပြိုင်ဖက်ကင်းတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာရှိပြီး ထူးခြားတဲ့ ပုံရိပ်နဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အချိုးအစားကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Design ပိုင်းတင်မဟုတ်ပဲ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့4x4နည်းပညာဟာ ခြွင်းချက်မဲ့ မြင့်များလှတဲ့ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ်။”
ဟု Land Rover ၏ Chief Design Officer ဖြစ်သူ Gerry McGovern မှပြောကြားခဲ့သည်။
Defender 110 ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉၅,၀၀၀ မှ စတင်ကာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှာယူနိုင်ပြီး Special Offer အနေဖြင့် ယနေ့ Launch လုပ်သည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့မှ စတင်ကာ စက်တင်ဘာလကုန်အထိ လာရောက်ဝယ်ယူသော Customers များကို Land Rover Myanmar မှ3Years Factory Warranty ၊5Years Service Warranty တို့အပြင် Special Price on Accessories Pack ၊ 24 hours Roadside Assistance ၊ 3M Auto Film နှင့် MAD Detailing Package များကိုထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
The New Land Rover Defender 2020 ကိုစိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် အမှတ်(၃)၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Jaguar Land Rover Showroom တွင်ဖြစ်စေ Hot Line No. 09953149376 သို့ဆက်သွယ်၍ဖြစ်စေ လာရောက်လေ့လာဝယ်ယူနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ့မီးရထား၏ ရထားခရီးစဉ်အချို့ပြေးဆွဲမှုကို ယာယီလျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ လူစီးရထားပြေးဆွဲမှုများကို ယာယီရပ်နားသွားမည်
YRTA အနေဖြင့် ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း Social Distancing ပိုင်းတွင်မူ အားနည်းမှုရှိနေ